Ogaden News Agency (ONA) – Filim iyo Sawiro: Warbixinti Waftiga ONLF ee Booqashada ku tagay wadanka Turki (Turkey)
Filim iyo Sawiro: Warbixinti Waftiga ONLF ee Booqashada ku tagay wadanka Turki (Turkey)
Wafti heersare ah oo kasocda Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa booqasho ku tagay wadanka Turkey bishii April 20 illaa 29 April 2013. Waftigan ayaa ka koobnaa madax kamid ah jabhada wadaniga xoreynta Ogadniya iyo xubno kamid ah ururada bulshada Somalida Ogadeniya.Waftigan ayaa waxaa hoggaaminayayHoggaanka Arrimaha Bulshada Mudane Maxamed Cabdi Yaasiin iyo Xoghayaha Arrimaha Dibada JWXO mudane Cabdi Raxmaan M. Sh. Mahdi.
JWXO iyo Kulamada Xisbiyada Wadanka Tukey
Waftiga Jabhada wadaniga xoreynta Ogadeniya ayaa 8 magaalo oo kamid ah wadanka Turkiga isugu bixiyay socdaalkooda iyaga halkaas si aad u diiran loogusoo dhaweeya. Masuuliyiinta Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa socdaalkan kula kulmay dhowr xisbiyo oo nufuud weyn ku leh dalkaas.
Shirka Culumada Bariga dhexe
Wafdigu markay hawlihii siyaasiga dhamaysteen waxay ka qayb galeen shirka kulanka Culumada barigfa dhexe, Bariga Dhow iyo Geeska Africa, Halkaas oo ay wafdigu ku soo bandhigeen, taariikhda Islaamka ee Geeska Africa iyo Kaalinta muhiimka ah ee Culumada Somalida Ogadenia ay ka qaateen barashada Diinta Islaamka ee Afrikada Bari. Waxaa kaloo halkaas khudbad aad qiimo badan oo ka khushuucisay culumadii Islaamka ka soo jeediyay Xaaji Maxamed A Yaassin. Culumada Islaamka ee Shirkaas isugu timid oo ka badan lixdameeyo dal waxay balan qaadeen inay dalalkooda iyo dadkooda gaarsiin doonaan dhibka lagu hayo ummadda Soomaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato.
Wafdiga markay shirarkoodii rasmiga ahaa dhamaysteen, waxaa la soo tusay horumarka ay gobolo ka mid ah dalka gaadheen iyo warshadaha iyo khayraadka dalka qaar ka mida, sida warshada, Beeraha iyo badroolka.
Waxaa kaloo wafdigu booqdeen goobo taariikhi ah sida Buurta lagu tuhmo in Doontii Nabi Nuux ku soo degtay xilligii biyihii lagu halaagay dadkii Ilaahay ku caasiyay ay dhammaadeen, iyo tuulo la yidhi waxaa la aaminsan yahay inuu ku aasan yahay. Waxaa kaloo ay soo booqdeen goobo ay ku aasan yihiin in ka badan 25 saxaabadii Nabgiga CSW.
Sidoo kale Wafdigu waxay ka qayb galeen xus ay ka soo qaybgaleen dad ku dhow hal malyan oo lagu xusayay mowliidu nabiga CSW.
Waxaa sidoo kale wafdiga waraysiyo kala duwan la yeeshay TV yada dalka, ayadoo halkaas ay si qiimo leh uga sharaxeen qaddiyada Somalida Ogadenia iyo marxalldaha kala duwan ee ay soo martay iyo xaaladda maanta ay ku sugan tahay.
Socdaalka waftiga Jabhada wadaniga xoreynta Ogadeniya ayaa kusoo dhamaaday guul iyaga oo baal cusub oo dahabi ah kasoo furay dalkaas.